jasiiradaha jasiiradaha qaybta 1 iyo 2
jasiiradaha jasiiradaha qaybta 1 iyo 2 1 sano 8 bilood ka hor #1243
Anigu waxaan kaliya dib ugu laabtay jumbo si aan u soo dejiyo versionkii ugu dambeeyay, dhammaanba waxaan sii wadayaa qashinka qaarkood oo ku saabsan faylasha maqan, marka faylasha oo dhan wada wada jiraan, ma jiraan wax musuqmaasuq ah faylka, laakiin rakibuhu wuxuu sameeyaa in uu raadiyo fayl aanuu heli karin 0.o
tan waxaa loogu talagalay fsx daabacaha uumiga.
Muuqaalkan xiisaha leh ayaa sifiican u shaqeeyay wakhtiyadii hore, laakiin waxaan ku qasbanahay in aan unifiyo sababta oo ah waxaan u baahanahay kheyraadka .. waxaan sameeyay rakibo cusub oo dhammaystiran fsx waxaana lagu rakibay boqolaal garoomo diyaaradeed iyada oo aan wax laga qaban, ka dibna si lama filaan ah tan. wixii caawimaad ah waa la qadarin doonaa!
jasiiradaha jasiiradaha qaybta 1 iyo 2 1 sano 8 bilood ka hor #1246
Waxaan aragnay xalal suurtagal ah:
1.Makebeeggaaga Browser aad u kacsanaa ... isku day mid kale oo ah sida chrome ee soo dejinta
2.Did isku day in aad isku furto xirmooyinka barnaamijka kale? Isku day 7zip ama winrar (wixii loo isticmaalo)
Ahh iyo btw ma tiri, feylkee ayaa maqan?
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray SkipperLP. Sababta: Smth ayaa maskaxdayda kusoo dhacday
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.153